Kupisa kutengesa komputa yekugadzira muchina wezvipfuyo mhuka mupfudze
M2600 inozvifambisa yega muchina wekushandura muchina. Iyo yakasimba simbi simbi uye gungano zvinhu zvinogamuchirwa neecherin indasitiri, izvo zvine zvakanakira senge hwakareba hupenyu hwebasa, yakafara kugadziriswa kune dzakasiyana ivhu, yakaderera kuchengetedza mutengo, nyore kutsiva, nezvimwe.
Kushanda Upamhi: 2600mm
Kushanda Kureba: 1200mm
Kushanda Unyanzvi: 720m³ / h
Chii chinonzi compost Turner?
Compost Turner, inozivikanwawo se compost inogadzira muchina, muchina unosanganisa muchina, muchina wekugadzira manyowa, musanganiswa we compost, nezvimwewo. Inoshandiswa kutenderedza, kumutsa, kusanganisa, kutyora uye kuisa oxygenate marudzi ese ehupenyu hwezvipfuyo zvipuka kubva kumapurazi senge mufudze wemakwai, bhiza mupfudze, mupfudze wemombe, mupfudze wehuku, manyowa ehuku, manyowa engamera ...
Kugadzira Organic fetiraiza ne TAGRM’s compost Turner?
1. Gadzirisa zvemukati zvemidziyo zvemukati, gadziridza iyo organic zvinhu kusvika panosvika 50%. Kazhinji marara emataundi anofanirwa kuwedzera mupfudze wezvipfuyo, mashanga ekurima anofanirwa kuwedzera mupfudze wezvipfuyo, matope emasipala anofanirwa kuwedzera dota rehuni, nezvimwe.
2. Unganidzai manyowa matsva mumurwi unokodzera mushini wemushonga unoshanda saizi.
3. Shandisa macompost kutendeuka muchina kutendeuka, kusanganisa, kupwanya uye oxygenate iyo composting zvinhu nguva dzose. Iyo yakagadzirirwa spray system inogona kuwedzera mvura kana kuvirisa.
4. Ongorora mamiriro ekuvirisa. Kana tembiricha yemanyowa yakagadzikana uye yakafanana netembiricha yemamiriro ekunze, hwema hwetompositi hwakafanana nevhu, ruvara rwe kompositi padhuze neruvara rutema, chimiro chemanyowa chakasununguka, iyo C / N <0.6, iko kuvirisa kwapera.
Muenzaniso M2600 Ground clearance 130mm
Rate Simba 68KW Kumanikidzwa kwepasi 0.46Kg / cm2
Rate kumhanya 2200r / min Kushanda upamhi 2600mm Max.
Mafuta anoshandiswa <235g / KW-h Kushanda kukwirira 1200mm Max.
Bhatiri 24V 2x12V Chimiro chemurwi Triangle 45 °
chinzvimbo chemafuta 40L Mberi kumhanya L: 0-8m / min H: 0-24m / min
Teedzera tsoka 2830mm W2 Kumhanya kumashure L: 0-8m / min H: 0-24m / min
Fudza chiteshi upamhi 2600mm W3 Kutendeuka nharaunda 1875mm min
Kukura 3400x2330x2850mm WlxLlxHl Dhiraivha modhi Hydraulic
Kurema 2600kg Pasina mafuta Kushanda chinzvimbo 720m3/ h Max.
Dhayamita ye roller 497mm Nebanga
M2600 compost muchina kuyedza firimu chinotenderera pane fekitori. M2600 compost kutendeuka muchina kusanganisa muriwo.
Pashure: Yakachipa kompositi inosanganisa muchina wezvipfuyo bhiza mupfudze compost Turner
Zvadaro: TAGRM compost hwindo rinotenderera rezvipfuyo nzou manyowa marara mu zoo
TAGRM kompositi hwindo rinotenderera yemombe elep ...
CE hosipaipi mupfudze hwindo Turner kuzvipira-pro ...
Dhongi mupfudze manyowa muchina organic fetiraiza ...